Kwemavambo mavambo kurambidzwa kudya nyama yenguruve - AFRIKHEPRI
Africa inobva pakurambidzwa kudya nyama yenguruve
Bhaibheri rinotii:(Revhitiko chitsauko 11 verset 1-9)
Asingagumi vakati kuna Mozisi naAroni:
"Tumira mirayiridzo iyi kuvaIsraeri: Idzi ndidzo mhuka dzamunogona kudya pakati pemhuka dzose dzinogara panyika. Iwe uchakwanisa kudya mhuka chero ipi zvayo ine mahwanda akaparadzana kana rutsoka rwakakoshwa uye runotumbuka. Kune rumwe rutivi, haungadyi chero chevaya vanongobata chete kana kuti vane mahwanda akaparadzana chete. Nokudaro, iwe haungadyi ngamera, iyo inopenya asi haina mahwanda akapwanyika; iwe unofunga kuti haina kuchena. Iwe haugoni kudya dhaman, iyo inopenya asi haina mahwanda akapwanyika; iwe unofunga kuti haina kuchena. Iwe haungadyi tsuro, iyo inopenya asi haina mahwanda akapwanyika; iwe unofunga kuti haina kuchena. Iwe haungadyi nyama yenguruve, iyo ine mahwanda akaparadzana, rutsoka rwakakoshwa asi harudi; iwe unofunga kuti haina kuchena. Iwe haungadyi nyama yavo uye haungabate chitunha chavo; iwe uchazviona sezvisina kuchena. "
Chii chinoti Korani inoti: (Surah 2 ndima 173)
"Kunyange zvazvo wairambidza nyama akafa mhuka, ropa, nyama yenguruve, uye izvo naro kunze Allah. Hakuna chivi iye kumanikidzwa pasina nemaune kusateerera kana nokudarika, nokuti Allah ndiye Anokanganwira, Ngoni. "
Izvo sayenzi inoti:
Nguruve imhuka ine mabhakitiriya akawanda, mavairasi uye zvirwere zvinokuvadza vanhu. Izvi zvakasimbiswa nesayenzi nokuti nguruve dzinotakura mhonye, ​​kusanganisira "tapeworm" uye dzakawanda zvakadai se "trichina", izvo zvinokonzera zvirwere zvakawanda, uye naizvozvo vatengi venyama iyi vaizosvibiswa. Kunyange zvazvo zvipenyu zvose zvine mabhakitiriya, nyama yenguruve inonyanya kuwanda uye yakawanda. Nguruve yakakwirira mucholesterol, iyo isiri yakanaka kubva kune utano uye nheyo yekuona.
African origin of this prohibition:
Kutenda shamwari dzedu dzeMuslim, dzinodya nyama yenguruve nokuti inenge iri Haram, kureva kuti yakarambidzwa. Sei chikafu chikarambidzwa kana zvose izvo Mwari zvaakasika, akafunga kuti zvakanaka? Uyu mubvunzo uri nyore unoderedza maonero echiIslami kuti aite. Saka zvakanyanya kukodzera kutarisa kune imwe nzvimbo nekuda kwechirevo ichi. Sezvo chirevo cheIslam chakanga chakafuridzirwa nechitendero cheKamiite Sabean, iri muKamitic yaifunga kuti tinofanira kutarisa chikonzero chikuru chekudziviswa uku kuti hapana muMuslim, kunyange yakanyanya kukura, aigona kupa.
Nguruve inofungidzirwa mumagariro emakamiti semhuka yeSishthian. Zvechokwadi, kana Ra anofamba kuburikidza Duat / Amduat, kuenda anunure mweya vakafa unbalance chikero Maat, chikepe chake vakarwiswa zvisikwa spewed ne Apopi nyoka kuti tarisa dzatsatsa / nguruve.
The Seeth / Héru myth
Mune kamite ngano yaSeti / Horus, Seti ndiye akauraya uye akauraya baba vaHeru anonzi Ousirê. Kweruzivo Ousirê aigara mu Africa makore gumi nemaviri apfuura mu Abydos. (-12.000 makore ona mepu yenyika yeDendérah). Parufu rwaOusirê, aive munhu wekutanga uyo akapfuura muyedzo we psychostasis (kutonga kwekuyera kwemoyo pamoyo pachiyero cheMaât). Chiitiko chinoitika muAmdouat. Kubudirira mune ino test-chostasie bvunzo kuchaita Ousrê the Khentamentiou - Imbwa Mwari weAdydos, mutungamiriri wemitambo yemariro, anozivikanwa naOsiris, kana achazova mwari weupenyu hunotevera.
Khentamentiou (iyo yakakwirira mumatenga ekutenderera).
Kubva pane urwu budiriro Ra achaburitsa chigaro chake semutongi wevakafa kuna Ousirê. Neichi chiitiko chiri nyore, Ousirê saka akave akaenzana naMwari. Nekuti, Mwari ndiye akasimudza wepamusoro padanho reticological iye achanzi Imakw (MuIjipita rekare, panguva yeKare Kingdom, imakh (yakawanda: imakhou) kana muchiFrench "a Vé-nrable" murume anobatsira mushure mekufa kwake, pamirairo yaFarao, kubva kumariro marariro ekusafa nekudaro achisvika chinzvimbo cheWakaropafadzwa .. Iyi chinzvimbo chemuridzi weguva chinoda kuve nekurovedza panguva yeupenyu hwake hofisi yepamusoro mukutonga. yenyika, kuve nekubereka vana kuti vadzokere kunamato yekunakidzwa uye kuve nehunhu hwakanaka).
Sei usina kudya yenguruve?
Zvechokwadi, izvo zvatinodya zvichashanda sezvinhu zvakagadzirisa kuumba kwedu. Saka tinogona kufunga kuti ndini zvandiri kudya. Saka kana ndikadya mhuka yeSethian my fluidic dimension (KA) inosanganiswa nesimba rakaipa remhuka iyi yakavanzwa mumuviri wemwana muchechi weganda. Ichi ndicho chikonzero mupirisita wemamite aisagona kudya mhuka inogona kumusvibisa.
Zvichidzoka, kushandiswa kwechingwa newaini, iyo inofananidzira chiKristu cheEucharist, ichachenesa muviri weanoidya. Zvechokwadi, chingwa newaini ndizvo zvokudya zvinosanganiswa naOusirê.
Generalization yevakarambidzwa kudya nyama yenguruve.
Under Amenhotep IV kana Akhenatan (Yakhouna Ya touna kana Kashoma Khounaton) inova chegumi Farao nemisere hwedzinza ndoupi ake ushe -1355 / -1353 kuti -1338 / -1337 ichabereka kumukira.
Akhenaton, uyo ari pa 8 akanga atogamuchira matanho ose evapristi veAmoni, achadzidza kare kare kuti kushandiswa kwegorosi kunomuita asina kuchena. Asi sezvo boka reAtonian rakasikwa, rinotaura kuti kuberekwa patsva kunokwanisika kune munhu chero ipi zvayo pakuremekedza Maat. Pakati pezvinorambidzwa zveboka reAtonian ndizvo zvinorambidzwa kudya nyama yenguruve. Izvi zvinongoratidzika chete nevapristi. Akhenaton inorambidza kurambidzwa kwekushandisa kwegorosi kusanganisira vanhu vakaderera.
Kudzorera uye kumira muIslam.
Nekudaro kana muna 639 maArabu achipinda muIjipita, zvinyorwa zvitsvene zveEgypt zvakabiwa uye shanduro yavo inozoitwa gare gare pakumisikidzwa kweAbasid Caliph Al Ma'mûn. Kuvakwa kweIslam kunozoitwa nekunyoropodza chikamu cheKamite Sabean. Imwe yekukwereta kweichi chitendero ichave pasina mubvunzo kubvumidzwa kwekushandiswa kwe nyama yenguruve. Ichi chitendero chitsva chinozopedzisira chataura zvakasarudzika nekutora dzidziso dzekuti hazvisanganise kurambidzwa kushandiswa kwe nyama yenguruve iyo iri kurambidzwa kweKamite sezvakaratidzwa pamusoro.
Zvizhinji zvezvikwereti izvi zvichabviswa mubhuku ravanoti Koran. In tisingatauri wenhoroondo, "neKorani zvichinzi zvakazara afa Muhammad, uye yokupedzisira shanduro yakatanga rechitatu caliph, Uthman (656 pashure AD), uyo yandakafuka kuparadza makopi ose nonconforming kune chinyorwa chinogamuchirwa naye kunze kwezvishomanana zvinonzi apocryphal.
Sechiyeuchidzo, muna 832, Al-Ma'mun aifanira pikidura muIjipiti, the Great Pyramid of Giza, yakavakwa naFarao KHUFU (2590 BC. To 2565 BC.), Mwanakomana King Snefru, inokurukurwa nevanyori vezvakaitika kare seimwe yevakakurumbira munhoroondo yeEgypt yekare. Zvinoratidzika kuti "vashanyi" vave nechinangwa chekuwana nzvimbo yekuviga yaFarao uye yehupfumi hwayo.
Ainyanya kufarira basa reyanzvi, kunyanya avo vaiziva chiGiriki. Akanga asangana muna Baghdad nyanzvi zvitendero zvose, yaakabata yakanaka uye kushivirira zvikuru zvizere. Akauya Byzantine manyoro, akaisa sezvo mamiriro rugare pamwe Byzantine Empire chokuendesa kopi Almagest. The yemasvomhu huru Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi akapedza akawanda hwake muna Baghdad pasi patronage kuti Al-Ma'mun caliph. Akashandura muchiArabic, pamwe navo, zvechiGiriki kuti Byzantium vakaungana muraibhurari akavamba neDare Caliph Mumba Uchenjeri, uye vakadzidza, kubva izvi geometry, nemasvomhu uye zvenyeredzi .
Panguva iyo ainzi Ibn Wahshiyah, zita remadunhurirwa rokuti al-Kasdani ( "muKaradhea"), zita raro rizere Abu Bakr Ahmed ibn Ali ibn Qays al-Wahshiyah al-Kasdani al-Qusayni al-Nabati al-Sufi, Arabic أبو بكر أحمد بن وحشية (repfumbamwe uye emakore chegumi), achaita kushandura hieroglyphs achishandisa Coptic. Anonziwo kuchanzi ari Kitab al-Shawq Mustaham, iyo inopa shanduro yekare veIjipiti, bhuku inokurukura dzimwe bumbiro akawanda.
Ebola, the origin ...
Mimwe mishonga yemishonga mishonga
Irobheni remusiya - Alain mabanckou